महिलाहरुलाई ४५ दिने हाते कडाई तालिम सुरु – Rajmarg Online
महिलाहरुलाई ४५ दिने हाते कडाई तालिम सुरु
दाङ, वैशाख ३ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ का महिलाहरुलाई हाते कडाई तालिम मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । नारी सीप समाज दाङको आयोजना र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ को आर्थिक सहयोगमा तालिम सुरु भएको हो ।
घोराही १८ ढोडेनीमा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी तालिम सुरु भएको हो । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष विष्णु थापाको अध्यक्षता तथा घोराही १९ का वडा सदस्य कृष्णबहादुर घर्तिको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी घर्तिले महिलाहरुको विकास र सशक्तिकरणका लागि वडा कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
महिलाहरुको आबस्यकतालाई महसुस गरेर वडा कार्यालयले तालिमहरुको लागि बजेट कार्यक्रम बनाउने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संस्थाको बारेमा जानकारी दिदै अध्यक्ष विष्णु थापाले करिव १५ वर्षदेखि महिलाहरुको सीप विकासका लागि काम गर्दै आएको र अहिलेसम्म दुई सय महिलाहरुले तालिम प्राप्त गरेर व्यवसायीक जीवन सुरुवात गरेको बताउनुभयो ।
४५ दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा वडाका २० जना महिलाहरुको सहभागीता रहेको छ । तालिमको प्रशिक्षकमा रञ्जीता चौधरी रहनु भएको छ ।